Home Wararka Khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta Muqdisho oo sii kordhaya (Sawiro)
Khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta Muqdisho oo sii kordhaya (Sawiro)
Ugu yaraan 8 ruux, ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaaladda Caasimadda ah ee Muqdisho sida uu sheegay afhayeenka Booliska Soomaaliya Cabdi Fitaax Aadan Xasan.
Booliska ayaa intaasi ku daray in qaraxa ay ku dhaawacmeen 17, ruux oo kale sida ku cad qoraalka Booliska.
“25-11-2021 abaaro 07:32hrs waxaa Qarax gaari ka dhacay inta u dhaxeysa isgoyska Tarabuunka iyo Guriga Ex.M. Cabdiqaasim gaar ahaan Afaafka Hore ee Iskuulka Mocaasir oo kuyaala kasoo horjeedka Dugsi sare Banaadir” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Booliska Soomaaliya.
“Gaariga Qarxay Noociisu waa Surf kana yimid dhanka Tarbuunka taarget.ka wuxuu ahaa Baabuurta waardiyeysa UN.ka ee looyaqaano Duguf Security Qasaaruhuna ay Turakoobeen Boliisku waa 8 Dhimasho ah iyo 17 Dhaawac ah” ayaa lagu soo xiray hadalka Booliska.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxaas, iyaga oo sheegay in ay la beegsadeen Saraakiil Cadaan ah iyo tababarayaal Millateri. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shaqaalaha iyo ardayda Iskuulka Mucaasir oo goobta kuyaalla, Haweeneey wadada nadiifineysay iyo dad kale oo wadada marayay.
Dhanka kale ayaa Mustaqbal u sheegay in 11 ka mid ah ardayd Schoolka Al Mucaasir oo qabo dhaawacyo kala duwan ayaa loo qaaday goobaha Caafimaadka . Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Mustaqbal u sheegay in qaraxa uu ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa laga beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka UN-ka.